SAWIRO: Masaajidka Towfiiq Islamic Senter oo xujey Soomaaliyeed u diray magaalada Makah. | gobolada.com
Aug 5, 2019 - jawaab
Iyadoo lagu guda jiro gudashada acmaasha xajka isla markaana malaayiin Muslimiin ah isku diyaarinayaan sidii ay ku gaari lahaayeen magaalada Barakeysan ee Maka Al-mukarama, ayaa masaasidka towfiiq Islamic senter magaalada Oslo ee dalka Norway oo ah masjidka ugu weyn Soomaali ku leedahay dalkani, waxaa u suurtagashay inay sanadkaan u fududeeyaan in ka badan 80 qof kuwaasoo isugu jira ragg iyo dumar inay gutaan rugni ka mid ah arkaanul islaamka.
Xujeydaasi oo ka kala yimid gobolada uu ka kooban yahay dalka Norway ayaa intii aysan ka amba bixin magaalada Oslo waxa ay ku qaateen masjidka towfiiq koorsooyin ka hadlaya sidii ay u gudan lahaayeen acmaasha xajka, maadaama intooda badan ay yihiin dad aan horay u soo xajin.
Immaamka Masaajidka towfiiq Sheekh Cali Maxamed Saalax ayaa casharo ku aadan ahmiyada ay leedahay gudashada waajibaadka xajka u jeediyey xujeyda Soomaaliyeed ee sanadkan nasiibka u yeeshay, waxa uuna sheegay in qofka muslimka looga baahan yahay noloshiisa mar inuu xajka tago, isla markaana maalka uu ku xajinaayo iska hubiyo xalaal ahaanshahooda.
Intaas kadib xujeyda ayaa u soo dhaqaaqeen garoonka diyaaradaha magaalada Oslo, iyadoona gudaha madaarka uu kula hadlay Maxamed Ibraahim Sahal kaasoo masjidka u qaabilsan arrimaha xujeyda kaasoo qeyb ka ahaa xujeydii baxaysay ayaa ugu horeyn ka hadlay tirada Soomaalida nasiibka u heshay sanadkan inay acmaashaasi gutaan, isagoona u mahadceliyey Tv-ga goobjoog xaruntiisa magaalada Oslo.
Sidoo kale qaar ka mid ah xujeydii ku sugnayd garoonka diyaaradaha oo aan wax ka weydiiyey dareenkooda ayaa waxay ka warbixiyeen inay ku faraxsan yihiin ka mid noqoshada malaayiinta muslimiinta lagu wado inay sanadkan xajiyaan, halka ay mahad ballaaran u jeediyeen guud ahaan maamulka iyo Immaamka Masjidka Towfiiq ee magaalada Oslo.